Clarabridge: hevitra azo ampiharina amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa rehetra | Martech Zone
Rehefa mihabe ny fanantenan'ny mpanjifa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny orinasa dia tsy maintsy mandray andraikitra hiantohana ny traikefan'ny mpanjifany ho salama tsara.
90% ny Amerikanina no mihevitra ny serivisy ho an'ny mpanjifa rehefa manapa-kevitra ny hanao orinasa miaraka amina orinasa iray.
Mety ho sarotra ny manantanteraka an'io tanjona io satria ny habetsaky ny fanehoan-kevitra azo atao dia mety goavana, ka miteraka ny Traikefa amin'ny mpanjifa (CX) ekipa tsy hahita ny fomba fijery sy ny vokany mifandraika amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa tsirairay. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fahita matetika, mitodika any amin'ireo fikambanana manerana ny indostria sehatra fitantanana traikefa ho an'ny mpanjifa manadihady ny fifandraisan'ny mpanjifa sy mamoaka vaovao izay afaka mampahafantatra ny fanavaozana ny vokatra, manatsara ny ezaka marketing ary mampiorina ny tsy fivadihan'ny mpanjifa maharitra.
Fitantanana ny traikefa amin'ny mpanjifa
Ny fikambanana dia voadona amin'ny fanehoan-kevitr'ireo mpanjifa — data petabytes amin'ny endrika antso an-tariby sy sora-tanana an-telefaona, naoty an'ny maso, fanamarihana an-tserasera, fifampiraharahana ara-tsosialy, hafatra amin'ny mailaka, mailaka ary fanadihadiana.
Ao anatin'ireny fifandraisana sy hevitra ireny dia maneho hevitra, fahatsapana na olana mifandraika amin'ny zavatra niainany tamin'ny vokatra, marika na fikambanana, ary koa ny fikasan'izy ireo hanatratra izany ny mpanjifa. Ny ankamaroan'ireo angon-drakitra ireo dia tsy ampiasaina firy amin'ny maha loharanom-pahalalana amin'ny asa sy fifaninanana azy. Izy io dia voatahiry amina rakitra maro an-tsary na an-tsoratra, izay tsy mora dinihina amin'ny alàlan'ny fitaovam-pitsikilovana nentim-paharazana natao hamahana ny angona voarafitra toy ny isa sy lisitra.
Clarabridge, mpamatsy vahaolana amin'ny fitantanana traikefa ho an'ny mpanjifa (CEM), dia miara-miasa amin'ireo marika malaza eran'izao tontolo izao toa ny USAA, Vera Bradley ary United, mba hialana amin'ny korontana sy ny fahasarotan'ny hevitry ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny AI, Clarabridge dia manambatra ny hevitry ny mpanjifa sy ny resadresaka ho foibe feno iray izay azo hamakafaka amin'ny alàlan'ny fanadihadiana an-tsoratra an-tsoratra sy lahateny an-tsarimihetsika tsara indrindra an'i Clarabridge miaraka amin'ny fomba fijery ara-potoana zaraina amin'ireo mpiara-miombon'antoka manan-danja manerana ny fikambanana.
Araka ny tatitry ny Salesforce's State of the Connected Customer, 80% ny mpanjifa milaza ny traikefa niainany orinasa manome dia manan-danja mitovy amin'ny vokatra sy ny serivisy. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, tsy maninona izay mivarotra na manome ny orinasanao, ny traikefa mpanjifa tsy hay hadinoina dia misy fiantraikany amin'ny indostria rehetra. Noho io antony io, i Clarabridge dia miara-miasa amin'ny andrim-panjakana amin'ny banky sy ara-bola, ny fikarakarana ara-pahasalamana sy ny fiantohana, ny entan'ny mpanjifa, ny antsinjarany, ny haino aman-jery sy ny haitao, ary ny fitsangatsanganana sy ny fandraisam-bahiny. Anisan'ireo mpanjifa ny SharkNinja, Nationwide, Adobe ary Crate & Barrel.
Clarabridge Analytics: manadihady ny fehezan-teny rehetra hahombiazan'ny CX
Mba hanamorana ny fiainana ny mpanjifa farany, ny mpanjifa Clarabridge dia mahazo vahaolana roa: Clarabridge Analytics sy Clarabridge Engage. Amin'ny alalan'ny Clarabridge Analytics, ny orinasa dia afaka mihoatra ny fanodinana ny fiteny voajanahary (NLP), ny fahatsapana sy ny fanasokajiana ny angon-drakitra handrefesana ny ezaka, ny fihetsem-po, ny fikasana ary ny famakafakana anton-javatra amin'ny alàlan'ny fomba fiasa mifototra amin'ny fitsipika mifehy sy ny milina mankany AI.
Nahoana no zava-dehibe izany? Orinasa maro no mety manana sombin-teknolojia handinihana ny sasany amin'ireto angon-drakitra ireto saingy tsy manana vahaolana feno manodidina izy ireo hahafantarana tsara ny fihetseham-po, famakafakana lohahevitra, famaritana lohahevitra, hamafin'ny fihetsem-po na isa ezaka. Clarabridge dia mamakafaka ireo fampahalalana rehetra ireo mba hanomezana fomba fijery iray manontolo momba ny mpanjifa. Clarabridge dia manampy ny orinasa hanao izany amin'ny fomba telo:
Fanadihadiana mifangaro, omnichannel - Tsy ela akory izay, ny mpanjifa dia nanana fomba vitsivitsy fotsiny hahatrarana marika iray. Ankehitriny, afaka miditra amin'ny marika amin'ny fotoana rehetra ny mpanjifa. Na antso, mailaka, chat, fanadihadiana, fifandraisana ara-tsosialy, naoty ary hevitra na forum, dia betsaka ny zavatra tokony harahina. Ho an'ireo fikambanana lehibe izay mety manana toerana maro eran'izao tontolo izao, ao anatin'izany ny ivon-toerana maro, dia fanamby ny fahazoana miditra amin'ny fifandraisana rehetra amin'ny mpanjifa. Mba hanampiana amin'ny fanangonana ny valin'ny hevitry ny mpanjifa amin'ny toerana iray dia mifandraika amin'ny loharanom-baovao an-jatony i Clarabridge, ao anatin'izany ny WhatsApp, Twitter, Facebook, firaketana antso, mailaka ary maro hafa.
Fanadihadiana an-tsoratra - Ny NLP dia ny fahaizan'ny programa informatika mamakafaka ny kabarin'olombelona hamaritana ny fiteny, ny fananganana fitsipi-pitenenana, ny entity — toy ny anarana, toerana ary marika — teny lakile sy teny mifandraika amin'ny fiteny ao anaty fehezanteny iray. Ny NLP dia zava-dehibe amin'ny fahatakarana angon-drakitra lehibe satria manome ny firafitry ny lahatsoratra marobe mba hahafahana mandinika bebe kokoa ireo lohahevitra, lohahevitra, fironana ary lamina teny hafa amin'ny fifandraisana an-tapitrisany. Clarabridge dia mandinika ny angon-drakitra dingana iray lavitra kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fahazoana ny teny voajanahary (NLU). NLU dia mitady ny hahatakatra sy haka ny dikany amin'ny fitenin'olombelona. Ny teknikan'ny NLU dia mandinika ny teny, fehezanteny ary ny toe-javatra hanombanana ny lohahevitra, ny fahatsapana, ny fihetsem-po, ny ezaka ary ny toetra mampiavaka ny kabary. Ny NLU no hery manetsika ny famakafakana lahatsoratra. Amin'ny alàlan'ny NLU, ny orinasa dia mahazo fahatakarana tsara kokoa momba izay resahin'ireo mpanjifa, manangona ireo lohahevitra miaraka amin'ny famakafakana mora, izay mitarika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra haingana kokoa amin'ny traikefa mpanjifa tsara indrindra.
Personalization - Tsy maninona na departemanta inona na iza, Clarabridge dia manamora ny fananganana ekipa dashboard ho an'ny ekipa, hisintona ny fampahalalana ilain'ny sampana ho toerana iray hahazoana fidirana mora sy fahitana haingana. Amin'ny alàlan'ny fisian'ny dashboard manokana, ireo departemanta manerana ny orinasa dia afaka mizara fahitana ary mamadika azy ireo ho hetsika. Zava-dehibe izany satria manantena ny hahita ny fanovana atao haingana ny mpanjifa — tsy afaka andro na roa volana.
Clarabridge Engage: fihaonan'ny mpanjifa aiza no misy azy ireo
Rehefa misimisy ny fantsom-pifandraisana nomerika dia manantena ny fifandraisana mivantana amin'ny orinasa ny mpanjifa. Mora ny milaza izany noho ny vita. Ny fitandremana ny resadresaka marobe, manerana ny sehatra marobe ary indraindray ny mpandraharaha maro dia sarotra.
Amin'ny alalan'ny Clarabridge Engage, orinasa afaka mifandray amin'ny mpanjifa aiza izy ireo ary manome traikefa mpanjifa ambony sy fifamatorana amin'ny alàlan'ny sehatra fifanakalozan-kevitra afovoany. Ny sehatra dia mamoaka resaka avy amin'ny fantsom-pifandraisana an-tserasera sy tsy mitovy fampandrenesana an-tserasera ao anatin'izany ny Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, SMS, WeChat, mailaka, naoty ary hevitra, forum an-tserasera, bilaogy ary maro hafa, mamela ny orinasa hifampiresaka, hamaly ary hampiditra ny mpanjifa amin'ny fantsona tena ampiasain'ny mpanjifa. Ny sehatra afovoany dia midika fa ny ekipan'ny serivisy dia afaka mijery ireo hafatra miditra rehetra, miditra amin'ny tantaram-pifanakalozan-kevitra ho an'ny toe-javatra ary mampiditra resaka manerana ireo fantsona. Ny fifanakalozan-kevitra dia voamarika ho azy miaraka amin'ny fampahalalana momba ny lohahevitra, ezaka, fihetsem-po ary maro hafa. Clarabridge dia manampy ny orinasa hifandray tsara amin'ny mpanjifa amin'ny fomba telo samy hafa:
Ampifanaraho amin'ny valim-pifamoivoizana mitambatra ny valiny - Miaraka amin'ny fidirana amin'ireo fantsona maro samihafa, azo atao ny mifandraika amin'ny fikambanana amin'ny sehatra mihoatra ny iray ny mpanjifa. Miteraka fanamby ho an'ireo fikambanana ny manara-maso ireo fangatahana sy resaka samihafa avy amin'ny mpanjifa. Ny fananana boaty mitambatra dia ahafahan'ny ekipa mpanohana ny mpanjifa mahita mora ny resaka taloha mba hahazoana fahatakarana tsara kokoa ny fangatahan'ny mpanjifa. Izy io koa dia manampy amin'ny fisorohana ny fampitahorana ny mpanjifa izay mety efa nizara ny fahasosorany tamina masoivoho hafa. Ho fanampin'izany, ny ekipa dia azo omanina amin'ny alàlan'ny valiny mialoha am-bifotsy, ny maodelin'ny torolàlana momba ny famoahana ary ny drafitry ny krizy izay mamela azy ireo hanao drafitra amin'ny tranga tsy ampoizina.
Fanaraha-maso tanteraka ny SLA - Fifanarahana amin'ny sehatry ny serivisy (slå) apetraka mba hiantohana ny kalitao, ny fahafaha-manao ary ny andraikitra. Na izany aza, ny fanaraha-maso ny SLA dia mety ho sarotra raha misy agents maromaro tafiditra ao, izay matetika no misy izany. Mba hanatsarana ny refin'ny fikarakarana ny mpanjifa, toy ny salan'isan'ny fotoana fitantanana (AHT) isaky ny tranga, ny tahan'ny vahaolana voalohany (FCR) ary ny hafainganam-pandehan'ny valiny, ny ekipa dia tokony hanana fidirana amin'ny fampahalalana rehetra amin'ny toerana iray ary hanana fahatakarana mazava ny faharetan'ny mpanjifa. niandry. Ny fampisehoana an'i Clarabridge's Watchdog dia mampahafantatra amin'ny ekipa ny fotoana naharetan'ny mpanjifa valiny iray mba tsy hahalasan'ny reps ny fotoana hamalian'izy ireo SLA.
Fametahana sy famindrana mandeha ho azy ho an'ny fotoana famaliana haingana - Matetika ny mpiasan'ny asa dia mavesatra amin'ny asa ambany indrindra izay maka fotoana amin'ny fanampiana mpanjifa bebe kokoa. Ny iray amin'ireto asa ireto dia ny fanondroana lohahevitra amin'ny resaka tanana mba hanampiana ireo mpiasa hamantatra lohahevitra lehibe. Amin'ny alàlan'ny herin'ny AI, ny ekipa dia tsy mila manisy marika intsony. Clarabridge Engage dia mamantatra ho azy ireo lohahevitra amin'ny resaka ara-tsosialy sy ny làlana voalaza ao amin'ny maso ivoho mety, amin'ny fotoana mety. Raha manao izany, ny agents dia afaka mahatakatra haingana ny filan'ny mpanjifa ary mamaly haingana na mamindra azy io amin'ny agents tsara indrindra hikarakara ny raharaha.
Ny fanantenana manodidina ny traikefan'ny mpanjifa dia hitombo hatrany. Tokony hitady vahaolana iray mitambatra ny orinasa raha tokony hanohy hiara-hiasa amina vahaolana vitsivitsy, hamaly ny filan'izy ireo.
Mangataha Demo an'ny Clarabridge
Tags: aibilaogyclarabridgefamakafakana clarabridgemandray anjaratatitry ny mpanjifa mifandrayresakafitantanana traikefa amin'ny mpanjifacxfanasokajiana dataInstagramomnichannelfamakafakana omnichannelpersonalizationnaoty sy hevitrasalesforcefamakafakana ny fahatsapanaSMSfamakafakana kabaryfamakafakana lahatsoratraTwitterboaty mitambatratafarayWeChat